The Irrawaddy's Blog: ဆယ်တန်းမဖြေဘဲ ဆရာမကိုခိုးပြေးတဲ့ ၁၆ နှစ်သား နောက်ဆက်တွဲသတင်း
ဆယ်တန်းမဖြေဘဲ ဆရာမကိုခိုးပြေးတဲ့ ၁၆ နှစ်သား နောက်ဆက်တွဲသတင်း
ရန်ကုန်က ၁၆ နှစ်သားနဲ့ ၄၁ နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတို့ ခိုးပြေးကြတဲ့ အမှု နောက်ဆက်တွဲသတင်းတခု ဒီကနေ့ထုတ် Venus News ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီကောင်လေးရဲ့အုပ်ထိန်းသူတွေက ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်ခဲ့တယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။
"ကောင်လေးတွေဖက်က လူပျောက်နဲ့ အရင် အမှုဖွင့်တာ၊ ပြီးမှ သွေးဆောင်ဖြားယောင်းမှုနဲ့ ပြောင်းပြီး ဖွင့်တာပါ" ဆိုတဲ့ ဗဟန်းမြို့နယ် ရဲစခန်းက တာဝန်ရှိသူတဦးရဲ့ ပြောဆိုချက်ကို တွေ့ရပါတယ်။
ကနဦးသတင်းတွေမှာတော့ ၄၁ နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးက ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကဆရာမ ဖြစ်တယ်၊ ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ အိမ်က ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်ထားတယ်၊ သူတို့ မန္တလေးဘက် ရောက်နေကြတယ်ဆိုပြီး ဖော်ပြထားကြတာပါ။ ဒီအကြောင်း
ဆယ်တန်းမဖြေဘဲ ဆရာမကိုခိုးပြေးတဲ့ ၁၆ နှစ်သား http://blog.irrawaddy.org/2014/03/blog-post_320.html ဆိုပြီး ဒီဘလော့မှာ ဖော်ပြခဲ့ရာမှာ တပတ်အတွင်း လူဖတ်အများဆုံး ၅ ပုဒ်ထဲမှာ ထိပ်တန်း ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ ရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့အိမ်တွေက ရဲစခန်းကို အကြောင်းကြား အမှုဖွင့်ထားကြဟန်တူပါတယ်။
သူတို့နှစ်ယောက် ဘယ်လောက်အထိ အနေနီးစပ်မှုရှိခဲ့တယ်၊ ဆက်စပ်မှု ရှိခဲ့တယ် ဆိုတာကို နှစ်ဘက် မိသားစုက သိချင်မှလည်း သိကြပါလိမ့်မယ်။
ဆယ်တန်းစာမေးပွဲဖြေဖို့ ရက်ပိုင်းလေးပဲလိုချိန်မှာ ဒီဖြစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါ။
ဒီကျောင်းသားလေး စာမေးပွဲဖြေပြီးချိန်အထိ မစောင့်နိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါလိမ့်မယ်။
စာမေးပွဲဆိုတာက ဖြေလိုက်တာ ကောင်းပါတယ်၊ အဆင်သင့် မဖြစ်သေးဘူး သို့မဟုတ် ဖြေနိုင်မယ် မထင်ဘူး ဆိုရင်လည်း အတွေ့အကြုံယူတဲ့အနေနဲ့ ရင်ဆိုင်သင့်တဲ့အခက်အခဲတခုပါ။
ဆယ်တန်းစာမေးပွဲက ဘ၀အတွက် အရေးကြီးတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ခိုးရာလိုက်ပြေးတယ်၊ နှစ်ဦးသဘောတူ ထွက်ပြေးတယ်၊ အိမ်ထောင်တခု ထူထောင်တယ် ဆိုတာကလည်း ဘ၀အတွက် အရေးကြီးတဲ့လုပ်ရပ်ပါပဲ။
အရေးကြီးတဲ့ဖြစ်ရပ် ၂ ခုကို ဒီဆယ်တန်းကျောင်းသား တပြိုင်နက် ရင်ဆိုင်လိုက်ရတာပါ။
စာမေးပွဲကို ရှောင်လိုက်တာ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာ သူတို့နှစ်ဦး ရန်ကုန်ကို လူသိရှင်ကြား ပြန်ရောက်တဲ့အခါ သိရမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
ထင်ပေါ်အောင်လုပ်ပြန်ပီ ဧရာဝတီ နောက်ဆက်တွဲ လို့ ပြောရလောက်အောင်မဟုတ်ဘဲ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပီဗျာ ခင်ဗျားတို့ မီဒီယာတွေက ပြည်သူတွေကို လုပ်သလိုလုပ် ပြောချင်သလိုပြော ဖြစ်နေတာမကောင်းဘူးဗျာ ခင်ဗျား သတင်းtitle အရ လိုက်ရင် အချိန် ငွေ အပြင် ယုံကြည်မှုပါ ကျစေတယ် ethics ဆိုတာ ထမင်း၁လုပ်လောက်တောင် တန်ဖိုးမထားသူ တွေ သတင်းသမားဖြစ်နေတာ ပြည်သူကိုစော်ကားနေတာ တိုင်းပြည်အတွက် တန်ဖိုးမဲ့စေတာ နဲ့ အတူတူပါ။ပြည်သူကို အလေးထားပါ လေးစားပါ မီဒီယာ တို့ရယ်။
ရုပ်ရှင်ဇတ်ကား ကြော်ညာ သလိုဖြစ်နေတယ်ဗျာ
bushabcd3000 said... :
အေးဗျာ ဒါ နောက်ဆွဲတွဲ သတင်းမှ မဟုတ်တာ လူတွေကို လိမ်သလိုဖြစ်တော့ မရှက်ကြဘူးလား ဗျာ
Terrible writing - this is NOT journalism. Seriously, whoever the writer is, you should be ashamed of yourself
သတင်း ဆို တာ တာ လား?
right that not news!
Char Mee said... :
နောက်ဆက်တွဲသတင်းလို့ရေးရအောင် ဘာထူးခြားတာပါနေလို့လဲ စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပြောတာပါ စိတ်မဆိုးရဘူးနော် အာဘွား.... Kiss ..... ;-)
တကယ်ဆို အချစ်ပဲ လိုတယ်။